Switzerland inozivisa kurambidzwa kupinda, kudzoserwa kwega kwevafambi vanobva kuUK nekuSouth Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Switzerland Kuputsa Nhau » Switzerland inozivisa kurambidzwa kupinda, kudzoserwa kwega kwevafambi vanobva kuUK nekuSouth Africa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Zimbabwe Breaking News • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kutevera kuwanikwa kweimwe nyowani, inopararira zvakanyanya yechirwere checoronavirus kuUK nekuSouth Africa, Federal Council nhasi yasarudza kutora matanho ekudzivirira kupararira kweutachiona hutsva uhu. Vanhu vese vakapinda muSwitzerland kubva kune idzi nyika mbiri kubvira 14 Zvita vanofanirwa kuenda kunzvimbo yekuisa vanhu kwemazuva gumi. Federal Council yazivisawo chirango chekupinda kubva nhasi kune vese vekunze vari kutsvaga kupinda muSwitzerland kubva kuUK nekuSouth Africa. Izvi zvinoitirwa kunyanya kumisa kufamba kubva munyika idzi nekuda kwekushanya.
Federal Council yakabvumidza kugadziriswa ku Covid-19 Mutemo 3 unorambidza kufamba nendege pakati peSwitzerland neUK neSouth Africa. Federal Office yeCivil Aviation FOCA nezuro yakaraira kuti ndege pakati peSwitzerland nenyika mbiri idzi dzimiswe kubva pakati pehusiku neSvondo, 20 Zvita.
Kuzvidzwa kwenguva pfupi kubva pakurambidzwa kwendege kuri kutariswa kune vanhu vanogara muUK kana South Africa parizvino vari kugara muSwitzerland kuti vadzokere kumba. Ndozvazvakaitawo kune vanhu vanogara muSwitzerland parizvino vanogara munyika mbiri idzi. Zvisinei, zvakakosha kuti nzendo dzakadai dzekudzoka dzisatungamira kuzvirwere.
Federal Council yakafunga zvakare kubvisa rusununguko rwenzvimbo dzekufamba kubva kuvanhu vanogara muUK kusvika 31 Zvita. Vanhu vanobva kuUK saka vari pasi pekurambidzwa kwese kupinda muSwitzerland. Rusununguko rwemafambiro ekufambisa evagari veBritish aifanirwa kupera pakupera kwegore zvakadaro.
Vakuru veUK neveSouth Africa vakapihwa ziviso yezvaimboitika.
Zviratidzo zvekutanga ndezvekuti misiyano mitsva yecoronavirus inonyanya kutapurika kupfuura iripo dambudziko. Izvo hazvisati zvanyatso kujeka kusvika padanho rakadii iro dambudziko idzva rapararira kunze kweUK neSouth Africa. Hapana zviitiko zvedambudziko idzva izvozvi zvakaonekwa muSwitzerland.